समाचार - प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध पछि, १००% बायोडिग्रेडेबल झोला राम्रो बिक्री भैरहेको छ!
प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध पछि, १००% बायोडिग्रेडेबल झोला राम्रो बिक्री गरीरहेको छ!
प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध को बारे मा, हामी यसको सट्टा के प्रयोग गर्नु पर्छ? बायोडिग्रेडेबल बैग यहाँ छ! प्लास्टिक उत्पादनहरु बिस्तारै प्रयोग बाट फिर्ता लिएका छन्, र नयाँ बायोडिग्रेडेबल सामाग्री नयाँ पर्यावरण मैत्री उत्पादनहरु को रूप मा प्लास्टिक उत्पादनहरु लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
पालतू पू झोला मकई स्टार्च र PBAT सामाग्री, जो १००% biodegradable छन् बनेका छन्। फोहोर झोला को कागज कोर degradable छ र सजीलो पहुँच को लागी एक humanized ब्रेकपोइन्ट इन्टरफेस छ। Degradable पालतू पू झोला आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
घरपालुवा जनावरको फोहोर झोला विभिन्न कुकुर हिड्ने दृश्यहरुमा प्रयोग गरीन्छ। तपाइँ तिनीहरूलाई बगैंचा, ट्रेल्स, पार्क, वन र अन्य ठाउँहरु मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पछि अवज्ञाकारी कुकुर poop छ, १ रोल बाहिर लिनुहोस् र १ झोला बाहिर फाल्नुहोस्, स्वच्छता को ख्याल राख्नुहोस् र वातावरण को रक्षा गर्नुहोस्।
कम्पनी एक पर्यावरण मैत्री संसारको सेवा गर्ने उद्यम बन्न प्रतिबद्ध छ! २०० 2006 मा स्थापित, कम्पनी जैव आधारित र कम्पोस्टेबल उत्पादनहरु मा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। धेरै बर्ष को लागी उद्योग मा, उत्पादन को गुणवत्ता को ग्यारेन्टी छ, र त्यहाँ एक पेशेवर बिक्री पछि टीम छ। Longjun 8 कारखानाहरु,7उत्पादन लाइनहरु र 50 भन्दा बढी मिसिनहरु संग 50 मिलियन अमेरिकी डलर को वार्षिक बिक्री संग एक समूह कम्पनी हो। यो ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ कि प्रत्येक ग्राहक को आदेश समय मा वितरित गर्न सकिन्छ। कम्पनी ईमानदार र उच्च गुणस्तरीय सेवाहरु संग हरेक ग्राहक प्रदान गर्न एक पेशेवर बिक्री टीम छ। Longjun Tianchun पर्यावरण संरक्षण कम्पनी ग्राहकहरु को OEM, ODM प्रशोधन प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी स्वीकार गर्दछ। तपाइँ तपाइँको आफ्नै लोगो, मुद्रण रंग, आकार विशिष्टताहरु, प्याकेजि sty्ग शैलीहरु र यति मा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
पोस्ट समय: अप्रिल -23-2021